Hiran State - News: M/weynahii hore ee Somaliya Cabdulaahi Yusuf Ahmed oo ugu baaqay madaxweynaha Somaliya inuu is casilo.
M/weynahii hore ee Somaliya Cabdulaahi Yusuf Ahmed oo ugu baaqay madaxweynaha Somaliya inuu is casilo.
Yemen:-M/weynahii hore ee Somaliya mudane Cabdullahi Yusuf Ahmed oo dhawaantan ka dhiidhiyey faro galintii qaawaneyd ee uu wadanka ku hayey wakiilka qaramada midoobay dhaliilna u jeediyey hogamiyaashii shirkii Kenya ka dhacayka qeyb galay isagoo xiligaasi aad u dhaliilay madaxweynaha Puntland ayaa maanta talo wax ku ool ah siiyey madaxweynaha waqtigiisa sii dhamaanayo ee baaritaanka ku socdo Shiikh Shariif Shiikh Ahmed.
M/weyne A yusuf oo wareysi siiyey idaacadaha ka howl gala Puntland qaarkood ayaa kula taliyey madaxweynaha Somaliya inuu sharciga ilaaliyo iskana casilo xilka uu hayo isagoo waliba sheegay inuu ka caawin doono wadamo nabadgalyo siyaasadeed siiya.
M/weynahii hore ee Somaliya waxuu ka mid yahay malaayiinta Somaliyeed ee aadka ula yaaban xukun jaceyl hogaamiyaashan dhalinyarada ah ee wadanka xakuma isagoo waaya aragtinimadiisa ka hadlayey waxuu yiri Shariif horey ayuu hal sano ugu darsaday waxaa loo qaatay inuusan sharafta iska qaadin dalkana doorasho ka dhacdo.
Waa masuulkii laaad ee maalmo isku xiga dhaliilay hogaanka hada jira waxaana maalmo dhaweyd si la yaab leh u dhaleeceeyey xukumada hada jirta R/wasaarahii hore ee Somaliya Dr Cumar A/rashiid oo isagu dabagalka dhinaca dhaqaalaha ee hada lagu hayo madaxweynaha Somaliya iyo lunsashada deeqaha loogu talo galay shacbaka Somaliyeed banaanka soo dhigay ayaa ugu baaqay in ay wadanka ka dhacdo doorasho xor ah.
Taageerayaasha Shariif oo dhawaantan markii uu dhaliilay shirkii Kenya lahaa waa wadani Cabdullahi Yusuf ayaa hadane laga sugi doonaa markey warbixintaan aqristaan sidii caadada aheyd iney hadane yiraahdaan waa oday waalan iyo wax la mid ah, maadama siyaasada reer koofurka aysan aheyn mid fadhisa.
Madaxweynaha dada yar ee Somaliya Shiikh Shariif waa hogaamiyahii ugu horeyey ee amra in safar laga hor istaago mudanayaal baarlamaan sidoo kale waa hogaamiyahii ugu horeyey ee Somaliyeed ee u yeerta kooxaha wadanka ka dagalaama ee jihaad doonka ah xiligaasi oo uu wadanka madaxweyne ka ahaa m/weynaha hada talada siinayo. waa hogaamiyahii ugu horeyey ee ku faxsan inuu madaxweyne dalka ka ahaado marba hadii ay mushaarsiineyso UNDP. waa hogaamiyahii ugu horeyey ee ku faana inuu booqasho ku tagay Boondheere iyo Shibis oo isla caasimada Somaliya xaafad ka tirsan ah.
Talada uu maanta u soo jeediyey madaxweynahii hore ee Somaliya mudane Cabdullahi Yusuf Ahmed ayey dad badan qiyaasi doonaan inuu qaadan doono hadii kale waxey arintiisa ku danbeyn doontaa sidii Sadam Hussen in aduunyadu daawado iyadoo Ilkahiisa la tirinayo.
· admin on May 10 2011 11:57:56 · 0 Comments · 2261 Reads ·
14,633,413 unique visits